Siem Reap cambodia - goobta, hoteelada, cimilada, garoonka diyaaradaha, waxyaabaha la sameeyo
Siem Reap waa magaala madaxda gobolka Siem Reap ee waqooyiga-galbeed ee Cambodia. Waa degmo caan ah oo irrid u ah gobolka Angkor.
Siem Reap oo maanta ah dalxiis caan ah ayaa leh hoteelo badan, dalxiisyo, maqaayado, iyo ganacsiyo dhow oo la xiriira dalxiiska. Tani waxay aad ugu badantahay u dhawaanshaheeda macbudka Angkor, oo ah meesha ugu soo jiidashada badan ee dalxiiska ee Kamboodiya.
Aaway Siem Reap?
Siem Reap, rasmi ahaan Siemreap waa degmo kaamboodiya, oo ku taal waqooyiga-galbeed ee Cambodia. Waxay xuduudo la leedahay gobollada Oddar Meanchey dhanka waqooyi, Preah Vihear iyo Kampong Thom dhanka bari, Battambang dhanka koonfureed, iyo Banteay Meanchey dhanka galbeed. Caasimaddeeda iyo magaalada ugu weyn waa Siem Reap. Waa xarunta ugu weyn ee dalxiis ee Kamboodiya, maadaama ay tahay magaalada ugu dhow ee macbudyada caanka ah ee Angkor
Maxaa loo booqdaa Siem Reap?
Cagaar cagaaran, qaab nololeed iyo dhaqan. Laakiin Sababta ugu weyn ee ay u imaanayso Siem Reap ayaa ah booqashada macbudyo aad u weyn oo Angkor Wat, oo ah taallada diinta ee ugu weyn adduunka, oo ku taal goobta lagu qiyaaso hektar 162.6. Asal ahaan waxaa loo dhisay macbud Hindi ah oo loo hibeeyay ilaaha Vishnu ee Boqortooyada Khmer, waxaa si tartiib tartiib ah loogu badalay macbud Buddhist ah dhamaadka qarnigii 12th.
Siem Reap ma mid nabdoonbaa?
Siem Reap waxay u badan tahay meesha ugu ammaansan ee laga helo Kambodiya. Waxay noqotay hoteel dalxiis iyo makhaayadaha sida ku habboon. In kasta oo dambi yar yahay nasiibdarro maaha wax aan caadi ahayn, haddii mid ka mid ahi uu ka leeyahay wax ku saabsan iyagu mid ayaa badbaado yeelanaya.
Mudo intee leeg ayaa lagu joogayaa Siem Reap?
Siem Reap laguma dabooli karo hal maalin. Waxaad u baahan doontaa ugu yaraan seddex ama afar maalmood si aad u daboosho baaxadda weyn ee macbudyada Angkor iyo soojiidashada kale ee aagga.
Goormaad booqan doontaa Siem Reap?
Wakiilka safarka ee xiisaha leh ayaa kuu sheegi doona in aysan jirin waqti xun oo la booqdo Siem Reap. Taas ayaa ah nooc run ah, illaa intaad laqabsato sida aad wakhtigaaga u lumiso mar marka aad halkan timaadid.
Xilliga qallalan wuxuu socdaa laga bilaabo Disembar ilaa Abriil, halka monsoon-ka May illaa Nofembar uu keeno cimilo qoyan iyo qoyaan badan.
Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqan karo Siem Reap waa bilaha Diseembar iyo Jannaayo, oo ay maalmuhu hubaal yihiin qorax iyo qalalan. Kaliya la soco in xilligan uu yahay xilligii ugu sarreeyay ee dalxiis, markaa waxaad ka heli doontaa meel aad u camiran meel walbana qiimaha ayaa ka sarreyn doona
Intee in le'eg ayaa xeebta ka socota Siem Reap?
Siem Reap ma laha xeeb xeebeed. Xeebaha Cambodia badanaa waa la dayacay iyadoo laga doorbidayo Thailand. Laakiin si tartiib tartiib ah, hubaal, jasiiradaha idyllic ee dalka iyo ciida cad ee Sihanoukville ayaa caan ku ah dadka jecel xeebta adduunka.
Masaafada u jirta Siem Reap ilaa Sihanoukville waxay u jirtaa 532km (350 mayl) dhanka wadada. Waxay u sabab tahay wareejintaan dhaadheer (10-15 saacadood wadada) in safraya badan doortaan inaysan u safrin Sihanoukville gabi ahaanba. Xulashada ugu dhakhsaha badan waa in la qaado diyaarad, oo qaadata saacadda 1.
Inta u dhaxaysa labada meelood ee caanka ah ee Kamboodiya, Siem Reap waxay umuuqataa meel fiican oo lagu fariisto. In kasta oo Phnom Penh uu matalayo isbadal, Siem Reap waxay qabataa nuxurka ilaalinta. Siem Reap wuxuu u muuqan karaa sidii tuulada gadaasha gadaal looga barbar dhigo Phnom Penh marka loo eego fursadaha ganacsi.
Siem wuxuu u goostey phnom penh: 143 mayl (231 km)
Markaad ka safreyso Phnom Penh una gudub Siem waxaad heysataa fursado kaladuwan oo ah 4:
Waad raaci kartaa bas - 6 saacadood
Waqti yar ku bixi oo taksi qaado - 6 saacadood
Diyaarso duulimaad - 50 daqiiqo
Qaado doonta doonta ku gudbeysa Tonle Sap Lake- 4 illaa 6 saac
Siem Reap si Thailand
Masaafada safarka ee Bangkok waa qiyaastii 400 km.
Inta udhaxeysa magaalooyinkaas waxaa ka shaqeeya shirkado basas lagu kalsoonaan karo, waxaadna qaadan kartaa:
Bas toos ah ayaa ka socda Siem Reap ilaa Bangkok. (6 illaa 8 saac)
Diyaarso duulimaad - 1 saac
Masaafada safarka ee Saigon illaa Siem Reap waxay qiyaastii u jirtaa 600 km dhul ahaan.
Ho Chi Minh waxaad uga safri kartaa:
Bas ahaan (12 - 20 saacadood, waxay kuxirantahay joogsiga Phnom Penh)
Waad ballansan kartaa duulimaad toos ah (1 saac)
Hoteelada Siem Reap
Waxaa jira boqolaal hoteelada ku yaal Siem Reap. Dhaqan ahaan ama casri, loogu talagalay miisaaniyad yar ama aan xadidneyn, laga soo bilaabo guriga martida ilaa hudheelka xiddigaha 5, qof walbaa wuxuu heli doonaa farxad.
Madaarka Siem Reap
Siem goorta koodhkii madaarka: Rep
garoonka diyaaradaha illaa Angkor Wat: Daqiiqadaha 17 (5.8 km) iyada oo loo maro Wadada Diyaaradaha
garoonka diyaaradaha illaa bartamaha magaalada: 20 - 25 daqiiqo (10 km)
Markaad u safreyso masaafada 9km ee Siem Reap Airport kuna aadan bartamaha magaalada, waxaad heysataa ikhtiyaarada 3:
siem goos goos